Koowheel isizukulwana 2 e-Rubber ikhwele yokuqala - Jomo Technology Co., Ltd
Hi ~ Ngenxa Koowheel 2 nd sizukulwana yombane Rubber Kooboard nguye Rubber yokuqala zombane ebomini bam, yaye kunqabile bachithe imali ukuthenga yokudlala ebiza onjalo (Ukongeza, bathenga umzila ibhayisekile with "isizathu esilungileyo" ...), ngoko ke wayezimisele ukuya epakini. Mna Kwakubuhlungu kakhulu bagqiba uvavanyo mileage uluhlu, kamva ukuchaza Kutheni na buhlungu.
Phambi kokuba ufunde ibali, kuqala ukwabelana idatha Rubber ukwenzela ireferensi.
Umthwalo lilonke Rubber koowheel zombane yi 61.9KG kunye ubunzima bomzimba 58.5KG + isixhobo Ukuphepha komzimba 1.6KG + izihlangu Ukubaleka ultra-ayisindi 0.2KG + 960ml Water + 1kg mobile phone izitshixo kunye nobutyobo 0.6KG.
I uhambo lokuqala
Izolo kwemini imozulu iseshushu kakhulu, wayefuna ukuba uthabathe Rubber ukuya Riverside Park, kodwa ngenxa yokuba usapho ixesha isidlo kufutshane kakhulu, kwafuneka ukuba aye kufuphi eweni ukuzama kuyo. Xa ngongcwalazi, i Park abantu kakhulu, ngoko kukukhawuleziswa kunye deceleration rhoqo kakhulu, malunga 5:30 pm, mna wabizwa lusapho lwam, eli xesha wathabatha imizuzu 55.
Emva kwesidlo sangokuhlwa, akazange anikezele ithemba ukuze abuye.
Kwaye emva kokuba waba isidlo kunye nentsapho yam abuyele Riverside Park ngentsimbi 9, eli xesha enyovwayo kuphela iimbaleki manqapha, ngoko ukudlala namafutha okwethutyana, indlela Okuninzi ukuphumla ukonwabela, eli xesha ekhwele iiyure ezimbini ezinesiqingatha .
Ngokuhlwa, ukutyibilika 10.68KM.
ngentsimbi yethoba ngokuhlwa, simke 28.76KM kwakhona.
Ithambeka iyatshintsha kancinane xa ephakame avareji kweemitha 26.
Idatha ingentla esabhalwa APP "Geo Tracker", yokubekwa satellite ukuya kwimo ngqo. Lane ibhayisekile malunga 2.3 km, kunye phantse asphalt yonke wamatye, 50 kuphela meters nzima kakhulu kunye iithayile (neendawo ezimbini zizonke kweemitha 50). Bendiya echithe malunga 3 iiyure nemizuzu 14 (phantse yonke emi skateboarding ~ _ ~ "), eneneni ngamava kakhulu buhlungu.
Eli xesha ridded 39,44 km ne ibhetri ngokupheleleyo ~ Wena abazange bayibone loo nto iphosakeleyo, kwibhetri omnye, ixesha emininzi ndandifuna ukuyeka phezulu ukuya ekhaya uze uvavanyo kwakhona omnye umhla, oku ubomi ngokwenene kakhulu olungaqhelekanga ... ... ... ... (yaye xa uphelelwe ibhetri, isandla yachukumisa ibhetri yajika kubande, imoto kuphela micro-lobushushu, ngokwenene Good ~), ndicinga ukuba zange ayeke uhambe, mileage kufuneka ibe ngaphezulu, ukuba nabani na ungumnikazi wale bhodi, ngoko ungazama. Kufuneka ibe ngaphezu ndiya kuma phezu Rubber .
Ngexesha processing yonke, kwafuneka iinguqu ezininzi isantya kwaye wagaleleka (lunikezelo yam deceleration kunye noluhlu nesantya nceda jonga umfanekiso ngentla), ngoko bacinga ukuba kufuneka 20km mileage uluhlu kwi umda (ngokunxulumene namava, kubakhi ngokuqhelekileyo isantya ufudo plus ngesantya esingaguqukiyo ukulinganisa phandle i data ezintle, ngoko ke asikwazi kholwa). Kodwa ngenxa yale mbono ngoko ukuba ezinye nobudlova (Mna ndicinga ukuba kuza ngesiquphe amandla off, kufuneka ubambe i 7.8 kg Rubber zombane wabuyela ekhaya).
Kwaye ngenxa yale mbono ephosakeleyo, ngoko ke ridded de ngentsimbi 12, umbane ngenene batshatyalalisiwe. (Okwaziyo data ziya kubhalwa 'endala kangaka ...... .. Ndaphelelwa ngokwenene), Kuyinto 20km ngokukhawuleza kunokuba kuqikelelwa isantya 20km. (kweli bali iyasixelela, ukuba sikhumbule intsingiselo wezikhanyiso ukubonisa amandla phambi yokudlala Rubber yombane, yaye musa ukucinga ukuba wonke umenzi kufuneka olukhohlisayo ').
emathangeni Abane kubo Bahlaliseni phantsi Rubber (umdlalo njengoko kart xa u udiniwe, yinto enkulu ngenene)
Ngentsimbi yethoba umda Isantya malunga 26.8KM.
Ngokufutshane, emva kolu vavanyo, oku kulandelayo zingangqinwa:
Le mileage Rubber yombane yinto entle kakhulu, abenzi ukubonelela idatha emithethweni kakhulu.
Motor kunye ibhetri umgangatho kulungile, abakhwela agudileyo phantse akukho superheat.
Ivili liya yothuse unyawo endleleni yezitena.
Ukuba kukho 12mm igrabile phantsi kweevili ezijikelezayo, amavili izakuxhumela khona.
Ukuba kukho uhlalutye 5mm, aluchaphazeli ulawulo.
Iziqhoboshi ezibukhali sensitive, nceda musa ukutyhala nzima kakhulu, kwaye wenze ingqwalasela wayeka ngenxa engaphambili.
ukusebenza lunikezelo Kuhle, kufuneka umdla ngakumbi emva iyavula.
It has a bhetyebhetye elungileyo kwindlela rough, bungqingqwa lebhodi nje ukwenza amasondo igxunyekwe.
Mileage ngasentla kunye novavanyo isantya iyenziwa ngaphandle kokuvula, yaye ndiza ukuvula ukubona isantya yokwenene webhodi kwixesha elilandelayo.